musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » Visa-yemahara yekufamba kubva kuPalestine kuenda kuSt Kitts neNevis izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Palestine Kuputsa Nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Visa-yemahara yekufamba kubva kuPalestine kuenda kuSt Kitts neNevis izvozvi.
Palestine ndiyo nyika yechina yekumisidzana hukama hwezvematongerwo enyika neSt Kitts neNevis mushure meBurkina Faso, Gabon, neEgypt mumasvondo mana apfuura.
St Kitts neNevis Tourism vachinyora chibvumirano chechina chemumiriri mumavhiki asingasviki mana.
Visa-yemahara waivers inobvumidza kurambidzwa-kwemahara kufamba kune vagari vemarudzi anosayina chibvumirano.
Iyi ropafadzo inosvikawo kune vanhu vakagashira ugari kuburikidza nenzira yehupfumi.
Mutungamiri weNevis uye Gurukota rezvekunze kweSt Kitts neNevis, Hon. Mark Brantley anga achishingairira kuvaka hukama hwepasi rose pamwedzi wapfuura.
Panguva yekurangarira kwe60th yekuyeukwa kweiyo Isiri-Yakaenderana Movement muSerbia vhiki ino, Gurukota Brantley vakasaina chibvumirano chekubvisa vhiza nePalestine.
Paresitina ndiyo nyika yechina kugadzirisa hukama hwehukama ne St Kitts naNevis mushure meBurkina Faso, Gabon, uye Egypt mumasvondo mana apfuura.
“Izuva renhoroondo reSt Kitts naNevis apo patinosaina [chibvumirano] chinodzosera vhiza chibvumirano naHE Riad Maliki Gurukota rezvekunze [re] Nyika yePalestine ichibvumidza kufamba-pasina mahara pakati pevanhu vedu vaviri. St Kitts naNevis vanoramba vachiwedzera nhanho dzezvematongerwo enyika pasi rose, "vakanyora Gurukota Brantley pa Instagram.
Visa-yemahara waivers inobvumidza kurambidzwa-kwemahara kufamba kune vagari vemarudzi anosayina chibvumirano. Izvi zvinoreva kuti vhiza yekupinda haidiwe kune zvizvarwa zverimwe nyika vasati vapinda munyika chibvumirano chakasainwa. Iyi ropafadzo inosvikawo kune vanhu vakagashira ugari kuburikidza nenzira yehupfumi, senge St Kitts naNevisUgari neInvestment (CBI) Chirongwa.
The State of Palestine, iyo nyowani yekuwedzera kuSt Kitts uye Nevis 'inokura runyorwa rwemavisa-emahara mafambiro ekupa, inobvumira vagari vayo kuti vapinde padyo nenzvimbo makumi matatu neshanu. Nekudaro, nemamiriyoni ePalestine anogara muchikepe nekuda kwekusagadzikana kwezvematongerwo enyika, vazhinji vanosangana nedambudziko rekufamba nyika dzese kana kutodzokera kumusha.
Kubudikidza nechibvumirano ichi "chenhoroondo", maPalestine diaspora uye vezvemabhizimusi vakasarudza kutora chikamu muSt Kitts neNevis 'CBI Chirongwa vanogona kufamba vasina vhiza kwete kuPalestine chete asi kune dzimwe nyika dzinosvika zana nemakumi matanhatu, kusanganisira dzidzo yepakati nemabhizimusi emabhizimusi.